5 Imewe ihe na-arụ ọrụ nke ọma maka ntụgharị ekwentị | Martech Zone
N'agbanyeghị na ịrị elu na ojiji ekwentị, ọtụtụ weebụsaịtị na-anapụta ahụmịhe mkpanaka na-adịghị mma, na-amanye ndị ahịa nwere ike ịpụ na saịtị. Ndị ọchụnta ego nwere naanị dị nnọọ mụtara ịnyagharịa desktọọpụ na-achọpụta na ọ na-esiri ya ike ịme mgbanwe na mkpanaka. Chọta ihe ịchọ mma kwesịrị ekwesị naanị nwere ike ịbụ nsogbu. Ndị ọchụnta ego ga-arụsi ọrụ ike iji ghọta ndị na-ege ha ntị lekwasịrị anya ma wuo atụmatụ ha na atụmatụ ha gburugburu onye na-azụ ahịa.
Rịọ ndị ahịa nwere ike ịdị mfe karịa ime eme. Otú ọ dị, ihe mgbaru ọsọ bụ iji tụnyere atụmatụ dị ukwuu nke saịtị na njiri dị mfe maka ndị ahịa ịzụrụ, mejupụta ụdị ndu ma ọ bụ kpọtụrụ azụmahịa gị. Ndị a bụ ihe atumatu ise ga - enyere gị aka ime ka ndị ahịa nwee ike ịgafe oghere.
Ebe nrụọrụ weebụ na-anabata Mobile
Inwe ebe nrụọrụ weebụ na-anabata mobile na-enye gị ohere ilele ibe gị anya gabiga ngwaọrụ niile na nha ihu. Ka ngwaọrụ ọhụrụ na-apụta, ndị ọrụ na-emegharị maka nha ihu ọhụụ, yabụ saịtị na-anabata ozi na-emeghe ụzọ maka nnyefe saịtị dị ọcha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ n'ezie ka saịtị gị dị mma, ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-etinye ụkwụ dijitalụ kachasị mma gị n'ihu. N’ikwu okwu n’ụzọ doro anya, saịtị ndị na-anabata ihe na-adị nnọọ mma ma dịkwa mfe ịnyagharịa na ịghọta. Nmeghachi omume dị ezigbo mkpa maka ndị ọrụ mkpanaka, yana ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-agba ọsọ na nke ọhụrụ mobile SEO na-agbanwe agbanwe ghọta mmetụta ọ nwere na ọkwa saịtị.
Mgbe ị na-achọ ọnlaịnụ, ndị ọrụ nwere ike tụgharịa gaa na ekwentị ha. N'ezie, nyocha ekwentị gafere nyocha desktọọpụ ọ dịkarịa ala mba iri, dị ka Google si kwuo. Ntinye nzaghachi ọ bụghị naanị na ọ dị mma, mana ọ na-abịa na ọtụtụ uru ndị ọzọ. Ọ na - enyere aka ịbawanye ọsọ saịtị ma bulie ahụmịhe onye ọrụ, nke na - emetụta SEO. Iji nyere gị aka kpalite mmụọ gị, lelee ụfọdụ ihe atụ nke nnukwu mobile aghụghọ
Jiri Ihe Onyonyo Dị Ike
Onweghị ihe dị njọ na foto onyonyo ole na ole na saịtị gị. Ngwaahịa dị ngwa ngwa, iwu, na ọtụtụ ọrụ maka ibute ozi akara gị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n 'ịchọrọ ime nnabata dị ukwuu, ọ kacha mma iji ihe onyonyo dị ike. Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa, gbalịa ịhazi maka a oge ịse ngwaahịa.Ha na-ekwu na foto bụ uru a puku kwuru; ọkachamara foto enyere mmetụta nwere ahịa ibu na-eme ka a zụọ.
E nwere ọtụtụ mmefu ego-enyi na enyi ụzọ na-aga na-eke mara mma oyiyi gị ngwaahịa. Ọ bụrụ n’ịre ahịa ma ọ bụ ngwaahịa ozi, gbalịsie ike ka ị rụpụta ihe. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere eBook iji nyere ndị na-emepụta aka inweta ego na Etsy, ị nwere ike ịchọrọ igosi ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọrụ ha dị elu. Chee echiche n’èzí igbe ma chọpụta ihe ndị ọzọ na-azụ ahịa na-eme na ụlọ ọrụ gị.
Ibe ndozi nke na akwado ume
Mgbe onye ọbịa bịara na webụsaịtị gị, ha achọghị ka ha pịgharịa gaa na enweghị njedebe iji nweta ozi ha chọrọ. Mepụta usoro nhazi nke ọdịnaya, na-enye gị ohere iji kesaa ihe kachasị mkpa na elu ma dozie ụzọ ya. Jiri akara ngosi na akara ngosi iji mee ka onye na-agụ ya mara na a ga-enyekwu ozi ka ha na-aga n'ihu na ibe. Site na ịkwalite ịpịgharị na-enweghị imeri ozi ahụ, ị ​​na-enwekwu ohere ịtụgharị ha na ndị ahịa.
Ndụmọdụ ọzọ dị ukwuu maka ịtụgharị ekwentị bụ iwelata igodo. Na ọdịnala, ịnwere ike iwepụta ibe ole na ole ọzọ na saịtị desktọọpụ gị, mana na ekwentị, ị kwesịrị ịlaghachi azụ ka ị ghara iji nhọrọ mechie onye ọbịa ahụ. Dika ekwuru na mbu, otutu ihe omuma gi di nkpa kwesiri inwe nnweta na peeji nke odida gi.
E nwere usoro ole na ole na-eme ka nke a dị mfe karị. Dịka ọmụmaatụ, akara ngosi akara atọ ama ama aghọọla ebe niile na ngwa mkpanaka. Yabụ, imirikiti ndị nleta na saịtị ahụ ga-amata nke a ozugbo dị ka ụzọ mkpirisi menu, na-ahapụ ohere dị gị mkpa na elu peeji gị. Nwere ike ịnwale ọnọdụ akara ngosi akara atọ iji hụ ebe ọ na-eme nke ọma na ibe gị.
Jiri Infographics mee ihe
Ihe omuma ihe omuma bu ihe omuma ma tinye ya n'ime ihe omimi ma obu uzo di omimi. Nke a bara uru na saịtị mkpanaka, ebe ndị ọrụ na-aga na-achọ ịgụ ma nyochaa ọdịnaya ngwa ngwa.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara na infographics nwere ike enyere usoro ahia ahia gi. Ndị ọchụnta ego kwesịrị ịchọpụta ụzọ ọhụụ pụrụ iche iji mepụta infographics iji mee ka ha soro ndị ọbịa ha. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị mmepe weebụ na-eji infographics na-agagharị iji dọta uche, dị ka nke a cheetah infographic. Ihe oyiyi a naanị anatala ihe karịrị 1,000 backlinks site na saịtị ndị ọzọ na-atụ aka na ya, nke gosipụtara nnukwu njikọ aka.
Dịka isiri hụ, enwere ike ị nwere ebe a. Ihe omuma ihe omuma ndi a na-enye ihe omimi a bu ihe di mfe ma gbanwee nke oma n’elu uzo di iche iche, site na webusaiti gi na ndi mmadu dika Facebook na Pinterest. Jiri ngwaọrụ dika Canva or Piktochart ime ngwa ngwa ihe osise.
Tags: okpukpudesignnyocha desktọọpụfotooyiyimbido peeji nkeInfographics Ahịandenye ọpụpụ ekwentịmobile imewemobile aghụghọecommerce ekwentịmobile anabatanyocha ekwentịmobile seo usorousoro ekwentịnavigationpiktochartoge ịse ngwaahịampịgharịA